Tranga tany Antsirabe :: Ray voatondro ho namono ny zanany roalahy • AoRaha
Tranga tany Antsirabe Ray voatondro ho namono ny zanany roalahy
Aretina sa antony hafa? Raim-pianakaviana iray, vao tanora erotrerony, no voalaza fa nahavita nandatsaka ny ain’ireo zanany roa lahy izay vao efa-bolana sy valo ambin’ny folo volana monja. Ny alakamisy sy ny zoma lasa teo no nitrangan’ity tranga mampivarahontsana ity tao Mandriankeniheny, tanàna iray somary mihataka ny renivohitr’i Vakinankaratra.
Tsy tao an-trano ny vadin’ilay lehilahy tamin’io alakamisy io ka nandritra izany no voambara fa nanararaotany nanaperana ny ain’ilay zaza efa-bolana. Nolazainy fa maty vokatry ny totongan-dronono ilay zaza rehefa tonga ny reniny. Ity farany anefa nilaza tamin’ireo fianakaviana sy ireo mpiara-monina fa tsy mbola voan’io aretina nolazain-drainy io ilay zaza.
Raha mbola variana nikarakara ny razana sy nandevina anefa izy ireo dia nanjavona niaraka tamin’ilay zanany voalohany, iray taona sy tapany indray ilay raim-pianakaviana.
Ny zoma indray izy vao nipoitra tao an-tanàna niaraka tamin’ny fatin’ilay lahimatoa. Nanamafy ny ahiahin’ireo mpiara-monina sy ny fianakavian’izy ireo ny fahitana dian-tanana teo amin’ny tendan’ilay zaza, ka teo ihany dia nampandre ny polisy izy ireo. Mbola tsy tonga teny an-toerana akory anefa iretsy farany dia efa niaiky ny heloka vitany ity raim-pianakaviana ity ary nilaza fa “ny alahelony ireo zaza izay mitomany lava” no antony namonoany azy. Niteraka fahatezerana ho an’ireo nanatri-maso teo izany, ka mba ho fiarovana azy sy ho fampiharana ny lalàna dia nentin’ny polisy avy hatrany ilay rangahy.
Hatreto aloha dia tsy misy porofo hanamafisana ny ahiahin’ny maro ny amin’ ny mety ho aretin-tsaina na zavatra hafa, mifono asan’ny maizina, ahiana ho nitarika izao vono olona niniana natao izao, koa dia ny fanadihadiana ataon’ny polisy no inoana fa hamaritra izay anton’ity fihetsika mamohehatra ity.
Fakana an-keriny :: Voasambotra ireo naka an-keriny Karàna teny Soavimbahoaka